Grunge - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၈၀ အလယ်ပိုင်းများ၊ ဆီအက်တယ်မြို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
﻿ Grunge (တစ်ခါတစ်ရံမှာ Seattle sound ဟုလည်း ရည်ညွန်းသည်) သည် alternative rock ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးပြီး ၁၉၈၀ အလယ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဆီအက်တယ်မြို့မှ ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း grunge ရွေ့လျားမှုသည် Seattle ရှိ independent record label (Sub Pop) တွင် လှည့်ပတ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ကယ်လီဖိုးနီးယား grunge အနုပညာရှင်များနှင့် အမေရိကန်အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှ အနုပညာရှင်များနှင့်အတူ ၁၉၉၀မှ ကျော်ကြားမှု ပြန့်နှံလာခဲ့သည်။ အဓိက record အရောင်းအဝယ် အဝယ်အဖြစ် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ Grunge သည် ၁၉၉၀ နှစ်ဝက်တွင် စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ပဓာနအားဖြင့် Nirvana ၏ Nevermind, Pearl Jam ၏ Tens, Soundgarden ၏ Badmotorfinger, Alice in Chain ၏ Diot နှင့် Stone Temple Pilot ၏ Core တို့တွင် ဖြစ်သည်။ ထိုတီးဝိုင်းများ၏အောင်မြင်မှုသည် hard rock ဂီတ၏ပုံစံများဖြစ်သော alternative rock နှင့် grunge တို့၏ကျော်ကြားမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်။grunge တီးဝိုင်းအများစုသည် ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ဖျက်သိမ်း ၍ ပျောက်ကွယ်ခဲ့သော်လည်း သူတို့သည် ခေတ်ပေါ် rock ဂီတကို လွှမ်းမိုးသက်ရောက်ဆဲဖြစ်သည်။
Grunge သည် hardcore punk နှင့် heavy metal ၏ အစိတ်အပိုင်းများရောနှောထားသည်။ ဂီတသည် punk ဂီတ၏ raw sound များပါဝင်ထားပြီး စာသားများမှာ ဆင်တူသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ နှေးသော tempo များ၊ မညီညာသော ဟာမိုနီများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော တီးခတ်ပုံများ ပါဝင်သည်။ heavy metal ကို ပြန်လည်တွေးတောထားသည်။ စာသားများမှာ လောကကို စိတ်ပျက်မှုများကို ရေးစပ်ထားသည်။
Grunge တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင် mainstream သို့ ရုတ်တရက် ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ Soundgarden သည် ပထမဆုံး grunge တီးဝိုင်းအဖြစ် အဓိက label အဖြစ်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၁၉၈၉တွင် A&M records သို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်အများစုသည် grunge အရေးပါခြင်းကျရှုံးလာမှုအပေါ် ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အတောအတွင်းတွင် grunge တီးဝိုင်းများ ပြိုကွဲခဲ့သည်။ Nirvana မှ Kurt Cobain သည် ဟီရိုးအင်းစွဲလမ်းလာခဲ့ပြီး အသက် ၂၇ အရွယ်တွင် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့သည်။
၃.၃ Mainstream အောင်မြင်မှု
၃.၄ Mainstream ကျော်ကြားမှု ကျဆင်းခြင်း
စာရေးဆရာ Paul Rambali သည် ၁၉၈၇ တွင် NME ဆောင်းပါတွင် mainstream rock ကို ဖော်ပြရန် ပထမဆုံး အသုံးပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Mark Arm သည် Seattle မဂ္ဂဇင်း Desperate Times တွင် သူကိုယ့်သူ Mark Mclaught ဟု နာမည် ဤဝေါဟာရကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်တီးဝိုင်း Mr.Epp နှင့် the Calculation ကို Pure grunge! Pure noise! Pure Shit! ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ Clark Humphrery သည် Desperate Timesတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။ Seattle တီးဝိုင်းများသို့ ရည်ညွန်းရာတွင် အစောပိုင်းသုံးခဲ့သော် ဝေါဟာရဟု ကိုးကားခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ - ၈၈ တွင် ဂီတဆိုင်ရာ label တွင် ဝေါဟာရ ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ Green River ကိုဖော်ပြသော သီးခြားဖြစ်ရပ်များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤဝေါဟာရသည် ၈၀ အလယ်တွင် King Snake Roost, The Scientists, Salamander Jim နှင့် Beasts of Bourbon တို့နှင့်အတူ ဩစတေးလျတွင် ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် punke/metal hybrid sound of the Seattle ဂီတဖြစ်ရပ်ဖော်ပြရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Some bands associated with the တစ်ချိုတီးဝိုင်းများသည် အမျိုးအစားနှင့် ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။ Soundgarden, Pearl Jam နှင့် Alice in Chains တို့ဖြစ်ပြီး label သို့လက်ခံရန် အသင့်မဖြစ်သေးချေ။ Rock and Roll အစား ရည်ညွန်းရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
grunge သည် ဂီတာ solo မပါဝင်သော်ငြားလည်း sludgy guitar ကို အသုံးပြုထားသော်လည်း မြင့်မားသော distortion, fuzz နှင့် feedback effect များကို အသုံးပြုထားသည်။ grungeသည် hardcore punkနှင့် heavy metal ၏အစိတ်အပိုင်းများ ရောနှောထားသည်။ ဂီတသည် punk ဂီတ၏ raw sound များပါဝင်ထားပြီး စာသားများမှာ ဆင်တူသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ နှေးသော Tempoများ၊ မညီညာသော ဟာမိုနီများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော တီးခတ်ပုံများပါဝင်သည်။ heavy metal ကို ပြန်လည်တွေးတာထားသည်။ တစ်ချို့ပုဂ္ဂလိကများသည် grunge ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ Sub Pop producer Jack Endinoနှင့် Melvins တီးဝိုင်းတို့ပါဝင်ပြီး grunge ၏ ပေါင်းစပ်ခဲ့ပုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ Kiss ၏ musical provocation ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် Nivana၏ stop-start သီချင်းသည် အမျိုးအစားထဲတွင် ပူးပေါင်းလာခဲ့သည်။ Allmusic က grungeကို hyrid of heavy metal and punk ဟုဆိုခဲ့သည်။ keyboard များမှာ grungeဂီတတွင် အသုံးမပြုသော်လည်း Seattle တီးဝိုင်းသည် Gorrila သည်guitar ချည်းသုံးခြင်း ရှောင်ကြဉ်၍ ၁၉၆၀ ပုံစံ Vox organ ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စာသားများမှာ လောကကို စိတ်ပျက်မှုများကို ရေးစပ်ထားသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဤကိစ္စကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ grunge ဂီတသမားများသည် လူအသိုင်းအဝိုင်း၏လွဲမှားစွာ ယုံကြည်နေခြင်းကို တင်ပြခဲ့သည်။ အပေါင်းအသင်းများနှင့် အဆင်မပြေမှုများကို ဖော်ပြသည်။ အကြောင်းအရာများသည် punk rock ဂီတသမားနှင့်ဆင်တူသည်။ ၁၉၈၀ အတောအတွင်းတွင် rock ဂီတ၏ အခြားပုံစံများသည်လည်း ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ grunge၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများသည် မြင့်မားသော ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများဖြစ်သည်။ grunge တီးဝိုင်းများသည် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ များစွာသော ဂီတအမျိုးအစားများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။ ၁၉၉၆ခုနှစ် documentary Hype တွင် Jack Endino ပြောကြားသည်မှာ Seattle တီးဝိုင်းမျာသည် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရာ၌ မဆီလျော်ဟု ပြောကြားသည်။
grunge ဂီတသမားများမှာ thrift store များမှာ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုကြသည်။ flannel ရှပ်များကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ Designနှင့် imageမှယူဆခြင်းအားဖြင့် grunge တီးဝိုင်းများမှာ lo-fi များကို အသုံးပြုထားပြီး ထုံးစံအတိုင်းမဟုတ်သော album cover များပါဝင်သည်။ ညှို့မှိုင်းသော colorများကို အသုံးပြုထားပြီး ပရိဒေဝဖြစ်နေသော စာသားများပါဝင်သည်။ punk rock ဒီဇိုင်းတွင် သုံးပြီးသားဖြစ်သည်။ computerအသုံးပြုခြင်း တိုးတက်လာသကဲ့သို့ digital ပုံရိပ်များလည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပုံစံကို grunge typography ဟူလည်း ခေါ်သည်။
grunge၏အသံများမှာ အခြားဂီတအဖြစ်အပျက်များမှ music Seattleမှ ဖြစ်သည်။ Sub Popမှ Jonathon Poneman ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “Seattleသည် တက်ကြွနေသာဂီတဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ ပြည့်စုံသော ဥပမာဖြင့် ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည်။ American မီဒီယာများမှ မသိကျိုးကျွန်ပြုသည်။ Mark Arm ထောက်ခံထားသည်မှာ “အခြားစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ဆုတ်ဖြဲထားသည်ဟုဆိုသည်။ grungeသည် local punk rockဖြစ်ရပ် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ လှုံဆော်ခဲ့သောတီးဝိုင်းများမှာ The Fartz, The U-Men, 10 Minute Warning, The Accused နှင့် Fastbacksတို့ဖြစ်သည်။ Melvinsတီးဝိုင်း၏လေးလံနှေးကွေးသော sludgyပုံစံများမှာ grunge sound တွင် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အနုပညာရှင်များနှင့် ဂီတဖြစ်ရပ်အကြောင်းအရာများသည် grunge အပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Alt-rock တီးဝိုင်းများသည် အမေရိကန်အရှေ့မြောက်အရပ်မှဖြစ် ပြီး Sonic Youth, Pixies, နှင့် Dinosour Jrတို့ပါဝင်ပြီး အမျိုးအစားအပေါ်အရေးကြီးစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Sonic Youth ၏ “inadventenly nurtured” တွင် grunge ဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်လာခဲ့ သည်။ ပြင်းထန်စွာအရေးပါလာသည်။ Pixies တီးဝိုင်းသည် Nivanaမှ Kurt Cobain လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Rolling Stoneအင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားထားသည်မှာ “ကျွန်တော် ဤတီးဝိုင်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှုမှာ ကြီးမားပါတယ်။ ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ Pixiesရဲ့ cover တီးဝိုင်းအနေနှင့်ရှိသင့်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ နှုးညံ့ငြိမ်သက်ပြီး ကျယ်လောင်ပြီး ခက်ခဲပါတယ်။ ၁၉၉၇ ဩဂုတ်လတွင် Guitar World မဂ္ဂဇင်းတွင် Dave Grohlပြောကြားသည်မှာ “Kurt, Kirstနှင့် the Knack, Bay City Rollers, Beatlesနှင့် Abbuတို့ကို Flipperနှင့် Black Flag တို့ကို ကြိုက်သလောက်ကြိုက်ပါတယ်။ Black Sabbath၏ War Pigs တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား၏ punkနှင့် alternative rock အရင်းအမြစ်မှ သွေဖည်၍ grunge တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၇၀အစောပိုင်းတွင် heavy metal အပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ “Babylon’s Burning From Punk to Grunge ၏စာရေးဆရာ Clinton Heylonက Black Sabbath ကိုကိုးကား၍ “ အနောက်မြောက်ဖြစ်ရပ်တွင် pre-punk လွှမ်းမိုးခဲ့ပါလိမ့်မည်။ Black Sabbathသည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် recordများကို ဖြတ်လျက် grunge sound ကို ပုံဖော်ခဲ့သည်။ ဂီတဗေဒပညာရှင် Bob Gulla Black Sabbath ၏အသံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားသည်မှာ grunge ၏အကျော်ကြားဆုံးတီးဝိုင်းများတွင် အကျိုးလုံးဝသက်ရောက်စေသည်။ Nivana, Soundgardenနှင့် Alice in Chains တို့ ပါဝင်သည်။ Led Zeppelin ၏လွှမ်းမိုးမှုကို Soundgarden ၏အလုပ်တွင် တွေ့ရသည်။ Guitar World တွင် Jon Wiederhorn ပြောကြားသည်မှာ တိကျတဲ့ grunge ဆိုတာဘာလဲ။ Creedence Cleanwater Revival, Black Sabbath နှင့် the Stoogesတို့ဟာ တော်တော်လေးနီးစပ်ပါတယ်။ Los Angeles hardcore punk တီးဝိုင်း Black Flag ၏ ၁၉၈၄ My War album သည် heavy metal နှင့် သူတို့၏ traditional sound များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Seattleတွင် ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်သည်။ Mudhoney တီးဝိုင်းမှ Steve Turner ပြေထားသည်မှာ “နိုင်ငံရှိလူတော်တော်များများဟာ Black Flagကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ တကယ်ဆန်းကြယ်တဲ့အသံတွေပါပဲ။ တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၈၄တွင် Seattle ဂီတဖြစ်ရပ်တွင် metalနှင့် punk ကိုစတင်၍ ရောနှောခဲ့သည်။
noise rockတီးဝိုင်းအချို့၏ raw, distortedနှင့် feedback- intensive အသံများသည် grunge အပေါ်လွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ထိုကြားထဲတွင် Wisconsin မှ Killdozerနှင့် San Franciscoမှ Flipper တို့ပါဝင်သည်။ Butthole Sufers တီးဝိုင်း၏ punk, heavy metalနှင့် noise rock တို့ ရောနှောထားသည်မှာ အဓိကလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။ ဩစတေးလျသီးခြားတီးဝိုင်းထဲတွင် The Scientists, Cosmic Psychos နှင့် Feedtime တို့ပါဝင်သည်။ သူတို့သည် grunge၏ ရှေ့ပြေးများဖြစ်သည်ဟု ကိုးကားခံရသည်။ သူတို့၏ဂီတသည် Seattle ဖြစ်ရပ်တွင် လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ Neil Youngသည် Pearl Jam နှင့် ဖျော်ဖြေတီးခဲ့ပြီးနောက် Mirror Ball album ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်အချို့သည် သူကို Godfather of Grunge ဟုအမည်ပေးကြသည်။ သူ၏ distorted guitar နှင့် ထူးခြားသည်မှာ Rust Never Sleeps albumဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင် ရုပ်သိမ်းခံရသည်။ Redd Kross တီးဝိုင်း၏ Neurotica album သည်လည်း လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ Jonatham Poneman ဆိုထားသည်မှာ Neurotica Seattle ဂီတအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့၏ ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
grunge၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထဲမှ မှုလဖြစ်သော ဖြန့်ချိမှုများထဲတွင်C/Z Record Deep Six ပါဝင်သည်။ Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunkshun, Skin Yard နှင့် The U-Men စသော တီးဝိုင်း၆ခုများ၏ trackများဖြင့် ထူးခြားသည်။ အနုပညာရှင်များသည် hardcore၏ တင်းမားခြင်းနှင့် heavy metal ၏ slower tempo များဖြင့် လေးလံသိပ်သည်းသော aggressive sound များ ပါရှိသည်။ ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Brace Pavitt၏ Sub Pop 100နှင့် Green River ၏ Dry AsaBone တို့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Sub Popမှ Bruce Pavittနှင့် Jonathan Poneman တို့ပြောကြားသည်မှာ ဂီတသမိုင်းကြောင်းထဲမှ ဂီတဖြစ်ရပ်များလှုံဆော်မှုကြောင့် သူတို့၏ label project ဖြစ်သော Seattle Sound ကို လုပ်ရန်သေချာလာခဲ့သည်။ တူညီသော ပုံစံ album များထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် တောင့်တင်းခိုင်မာလာခဲ့သည်။ ဂီတစာရေးဆရာ Michael Azerradသည် Mudhoney, Soundgarden စသော အစောပိုင်း grunge တီးဝိုင်းများကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
အစောပိုင်းgrunge ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများသည် ကြဲသော်လည်း Sub Pop photographer Charles Peterson၏ ပုံများသည် သီဆိုပွဲများမှ အဓိကဖြစ်ရပ်များကို အကူအညီပေးခဲ့သည်။ Sub Pop သည် Seattle grunge ရွေ့လျားမှုတွင် ဦးဆောင်နေစဉ် Green River တီးဝိုင်းတည်ထောင်သူ Mudhoney သည် Sub Popတီးဝိုင်း flagshipတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်အရပ်မှ အခြား record labelများသည် grunge ကိုထောက်ကူအားပေး ကူညီခဲ့သည်။ C/Z Records, Estrus Records, Empty Records နှင့် PopLIama Records များပါဝင်သည်။ Pavitt နှင့် Poneman တို့သည် ဗြိတိန်မဂ္ဂဇင်း Melody Maker မှ သတင်းစာဆရာ Everett True ကို local ဂီတဖြစ်ရပ်ဆောင်းပါးရေးရန် တောင်းဆိုပြီးနောက် grunge သည် အင်္ဂလန်မှ မီဒီယာများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းအတောအပိုင်းတွင် local area အပြင်ဘက်တွင် လည်း grunge ကိုသိရှိလာကြသည်။ local show များစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ grune ၏ underground ဂီတထဲတွင် ကျော်ကြားမှုသည် တီးဝိုင်းများကို Seattle သို့ပြောင်းရွေ့စေခဲ့သည်။ Grungeတီးဝိုင်းအများစုသည် သူတို့၏ အသံများ သုံးလေးမျိုးခွဲလိုက်သည်။
grunge တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းတွင် mainstream သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ Soundgarden သည် ၁၉၈၉တွင် A&M Records တွင် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး grunge တီးဝိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ Nirvana သည် Aberdeen, Washingtonမှဖြစ်ပြီး ၁၉၈၉ တွင် Bleach album ထွက်ပြီးနောက် major label ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Nirvana သည် ၁၉၉၁ စက်တင်ဘာတွင် Nevermind albumထွက်လာခဲ့သည်။ album သည် အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ MTV တွင် ပြသခြင်းခံရသည်။ Nevermind သည် ၁၉၉၁ ခရစ်စမတ်တွင် အချပ်ရေ ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ရောင်းရသည်။ ၁၉၉၂ ဇန်နဝါရီတွင် Nevermind Billboard 200 တွင် နံပါတ်၁နေရာတွင်ရှိသော pop superstar Michael Jackson၏ Dangerous နေရာတွင် အစားထိုးခြင်းခံရသည်။ Nevermind ၏အောင်မြင်မှုသည် ဂီတစက်မှုဇုံကို အံဩစေခဲ့သည်။ Nevermind သည် grungeတွင် ကျော်ကြားရုံသာမက ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးအရ alternative rock တွင် အလားအလာရှိလာခဲ့သည်။ glam metalသည် rock ဂီတကို လွှမ်းမိုးနေချိန်တာင်ယဉ်ကျေးမှုအရ ဆက်နွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ grunge သည် mainstream ၌ ရောင်းချနိုင်ရန် စီးပွားရေးပရိသတ်များ များပြားလာခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းအစများဖြင့် ခိုင်မာစေခဲ့သည်။ အခြားgrunge တီးဝိုင်းများသည် Nirvana ၏အောင်မြင်မှုနောက်သို့ လိုက်ရှိခဲ့သည်။ Pearl Jam သည် ၁၉၉၁ ဩဂုတ်လတွင် Ten album ထွက်လာခဲ့သည်။ album၏ ရောင်းအားမှာ တစ်နှစ်ကြာပြီးမှ ရောင်းအားမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ နှစ်ဝက်တွင် “Ten” album သည်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ပြီး Billboard chartsတွင် နံပါတ်၂နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Soundgarden ၏ Badmotorfinger နှင့် Alice in Chain ၏ Dirt album ပြီးနောက် Temple of the Dog တီးဝိုင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ခုနစ်၏ 100 top selling album ဖြစ်လာခဲ့သည်။ grunge တီးဝိုင်းများ၏ ကျော်ကြားမှသည် Rolling Stoneမှ Seattleမြို့ကို “ the new Liverpool”ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းများသည် အောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် မြို့သို့ပြောင်းရွေ့စဉ် အရေးပါသော grungeတီးဝိုင်းများသည် Seattle မြို့တွင် အဓိက record label များ ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ grunge ဖြစ်ရပ်ထဲတွင် Cameron Crowe ၏ single filmလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျော်ကြားသော Seattle grunge တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Pearl Jam, Soundgarden နှင့် Alice in Chains တွင် ဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ တွင် Seattle မြို့တွင် ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ grunge ဂီတသည် ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး Seattle ဂီတဖြစ်ရပ်တွင် ကြီးမားစွာ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ Seattle ဂီတဖြစ်ရပ်သည် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် ဂီတ၏ ကွဲပြားသော ပုံစံများနှင့် အမျိုးအစားများပါဝင်သည်။ များသော အနုပညာရှင်များသည် သူတို့၏ အောင်မြင်မှုနှင့် အတူ မချောင်မချိဖြစ်လာကြသည်။ Nirvana မှ Kurt Cobain က Michael Azerrad ပြောကြားသည်မှာ “ကျော်ကြားမှုသည် ကျွန်တော်လို ချင်သော နောက်ဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ Pearl Jam ကလည်း အောင်မြင်မှု၏ ဝန်ကို ခံစားရသည်။ Nirvana၏ (၁၉၉၃) In Utero album ထွက်လာခဲ့သည်။ Nirvanaမှ ဘေ့စ်ဂီတသမား Krist Novoselic ပြောကြားသည်မှာ “ရိုင်းသော aggressive soundနဲ့တကယ့် alternative မှတ်တမ်းပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။ ဖြန့်ချိပြီးမကြာခင် Billboard Charts တွင် ထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Pearl Jam သည်လည်း ၁၉၉၃တွင် ဒုတိယမြောက် album VS ထွက်လာခဲ့ပြီး ပထမအပတ်အတွင်းတွင် ၉၅၀၃၇၈ အချပ်ရေရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Billboard chart တွင် ထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းတွင် ဝေဖန်ရေးသမားများက grunge soundသည် Seattle မှ မဟုတ်ဟု ဝေဖန်လာကြသည်။ အမေရိကန်တီးဝိုင်း Stone Temple Pilotsသည် ၁၉၉၄ဇန်နရီတွင် Rolling Stone မှ စာဖတ်သူများမှ Best New Bandနှင့် မဂ္ဂဇင်းဂီတဝေဖန်ရေးသမားများက Worst New Band ဟုမဲပေးခြင်းခံရသည်။ ဝေဖန်ရေးသမားများနှင့် ဝါသနာအိုးများကြားထဲက ကွဲလွဲချက်များဖြစ်သည်။
Mainstream ကျော်ကြားမှု ကျဆင်းခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုယ်စားလှယ်တော်တော်များမှာ grunge ဂီတကျဆင်းရာ၌ ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နှစ်ဝက်အတောအတွင်းတွင် grunge နေရာတွင် post-grunge ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၂၁ရာစုအစတွင် စီးပွားရေးအရ အလားအလာရှိလာသည်။ Post-grunge တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Candlebox နှင့် Bush တို့သည် grunge ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုအနုပညာရှင်များသည် grunge ၏ရင်းမြစ်တွင် လိုအပ်လာပြီး ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ Post-grunge သည်စီးပွားရေးအရ အလားအလာရှိသော အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး grunge ၏ distorted guitar များနှင့် ရောစပ်ထားသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် United Kingdom တွင် grunge ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် alternative rock အမျိုးအစားဖြစ်သော Britpop ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Britpopကို ငယ်ရွယ်နုပျိုသော ဆန္ဒကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဟုဆိုသည်။
၁၉၉၀ အတောအတွင်းတွင် grunge တီးဝိုင်းများပြိုကွဲခဲ့သည်။ Kurt Cobainသည် သမားရိုး မဟုတ်သော အောင်မြင်မှု၏ဒဏ်ကို ခံရသည်။ ဟီရိုအင်းလည်း စွဲလာခဲ့သည်။ ၁၉၉၄အစောပိုင်းတွင် ကောလဟလမှာ Cobain သည်ဆေးလွန်ခဲ့ပြီး Nirvana ပြိုကွဲခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၉၄ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့တွင် Cobain သည် မိမိဘာသာရရှိသော သေနတ်ဒဏ်ရာနှင့် သေဆုံးနေသည်။ Nirvana တီးဝိုင်းသည်လည်း ပြိုကွဲခဲ့သည်။ Pearl Jamသည် လက်မှတ်ခဈေးကြီးသည်ဟု ယူဆကာ နွေရာသီခရီးစဉ်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ Pearl Jamသည် company ကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ နောက်သုံးနှစ်အတွင်း အမေရိကန်တွင် တီးဝိုင်း၏ show ပွဲများကို တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းခံရသည်။ Alice in Chains သည် ၁၉၉၆တွင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် Layne Staleyသည် ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ကိုကင်းနှင့် ဟီရိုအင်းဆေးလွန်း၍ သေဆုံးခဲ့သည်။ Soundgarden နှင့် Screaming Tree တီးဝိုင်းတို့သည် ၁၉၉၆တွင် Down on the Upside နှင့် Dust တို့ထွက်ရှိလာခဲ့သည်။
grungeတီးဝိုင်းအချို့သည် recording နှင့် ခရီးစဉ်များမှ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားဆုံးမှာ Pearl Jam ဖြစ်သည်။ Kurt Cobain ၏ ပုံကြမ်းလက်ရာများနှင့် စာမူများကို စုစည်းထားသော Journalsနှင့် Nirvana တီးဝိုင်း၏အကောင်းဆုံးတစ်ပေါင်းတည်း စုစည်းထားခြင်းများကို ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ The New York Timesမှ Nirvanaကို ထောက်ခံထားသည်မှာ ၁၉၉၄တွင် Mr.Cobain သတ်သေခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှုများပို၍ ရရှိခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။ Nirvana ၏ “You Know You’re Right” သည် Hot Mainstream Rock Tracksတွင် နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၁ရာစု၏ပထမဆယ်စုနှစ်အလယ်တွင် The Seattle Times သတင်းစာမှ Seattle မြို့မှ ပေါ်ထွက်လာသည့် grunge လွှမ်းမိုးသည့်အုပ်စုများကို ရေးမှတ်ခဲ့သည်။ Post Stardom Depression, The Valley, The Vines နှင့် Weapons တို့ပါဝင်သည်။ The Guardian နေ့စဉ်သတင်းစာမှလည်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Yorkshire မှ Dinosaur Pile-Up, The Old Romantic Killer Band, The Tempus , Above Them, Pulled Apart by Horsesနှင့် Wonderswan တို့ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၃တွင် New York Timesသည် နိုးကြားလာသော grunge fashing ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Alice in Chains သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး Way to Blue album ထွက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃တွင် The Devil Put Dinosaur Here album ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၂ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Stoner rock နှင့် sludge metal တို့ လွှမ်းမိုးမှုများပါရှိသည်။ Soundgardenသည် King Animal ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဒိန်းမတ်၊နယူးဇီလန် နှင့် အမေရိကန်တို့တွင် နံပါတ် ၅ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
↑ Grunge။ AllMusic။ Rovi Corporation။ 24 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Paul Rambali။ "he American Midwest: Akron and Cleveland--Exploring alternative hives of industry in Akron, City of Rubber, and Cleveland, City of Steel"၊ April 1, 1978။
↑ Masco၊ Maire (2015)။ Desperate Times: The Summer of 1981။ Fluke Press။ ISBN 978-1938476013။
↑ True၊ Everett။ "No End in Sight: Mudhoney Is Alive and Well"၊ The Stranger၊ 20 January 2001။ 11 September 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Clinton Heylin. Babylon's Burning: From Punk to Grunge. Conongate, 2007. ISBN 1-84195-879-4, p. 606.
↑ Brett Buchanan။ BEN SHEPHERD TRASHES GRUNGE LABEL, SAYS SOUNDGARDEN WERE NEVER A GRUNGE BAND။ AlternativeNation.net။ 12 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pearl Jam: Interviews with all five members။ ew.com။
↑ Interview: Alice in Chains â€" The National Student။ Thenationalstudent.com (2013-10-07)။ 2015-07-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Grunge&oldid=736874" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၉:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။